IFTIINKACUSUB.COM: Maxaad ku jeclateen Heesaha ??
Maxaad ku jeclateen Heesaha ??
Inamo iyo Habloba walaalayaal waxaan idin leeyahay si cadaan ah imisa ayaa aduunyo ina dhaafay miyaynaan xaq isku lahayn inaynu waxa isku sheegno si degan oo waxa ku qaadasha leh.
Walaalayaal waxaan idinka rajaynayaa in aydana igala bakhaylin akhriska maqaalkan oo aad u hurtaan daqiiqado yar oo wakhtigiina ah, qofka aan karayn imika in uu akhristo ha daabacdo oo mar kale ha akhristo.
Walaalayaal kuwa heesaha dhagaysanayow hadaladaydani waxay idinku yeedhayaan rajo hana odhanina waxba kama faa’iidayno haddii aan idinku celceliyo waanada, laakiin si sugan oo lagu kalsoon yahay waxaad u tidhaahdaan daacigu wuxuu yidhaahda qofka Caqliga leh ayaa xaq u leh in wax loo sheego.
Waa wanaag Bal aynu bilowno: Miyaanad u fiirsanin qofka dhagaysiga heesaha wakhtiga badan ku luminaya isagoo is lulaya, laakiin ay ku adag tahay in uu saacad kaliya kitaabka illaahay akhristo, kitaabku waxa uu daweeya laabaha waana hanuun iyo raxmad, waa kitaab samaawi ah oo leh barako nuur, khayr iyo Caafimaad intaba ..!
Naftaada ma waydiisay waxaan heestu kuugu macaantahay ee aad ugu raaxaysanayso isla markaana ay kugu adkaatay in aad u fadhiisato oo si degan u akhrido quraanka?
Si Hufan: Illaahay (SW) waxa uu yidhi "Shaydaanka ayaa u qurxiya Camaladooda" tani waa xaqiiqada waana ta aan darteed idinla hadlayo.
Kuwii aan Jeclaayow: Waxa masiiba ah in aynu khiyaamayno nafteena waxa ka sii daran mala’awaalka iyo nolosha cidhiidhiga ah ee ay inaga mashquulinayso xusuusta illaahay, illaahay waxa uu yidhi "Qofka ka jeesta Xasuustayda noloshaan kaga dhigaa cidhiidhi qiyaamahana waxa la soo saari isagoo indha la" Heesuhu runtii waa khasaare waana wax xun oo ka yimaada dhinaca shaydaanka…..
Bal maqla hadalkan Illaahay (SW) oo kula hadlayo shaydaanka "Ku kaxayso kaad karto codkaaga kuna xidho xadhigaaga oo la wadaag maalka iyo awlaada oo u yeedho, shaydaankuna idinkuma yeedhayo wax aan ahayn been".
Ibnu Kasiir (I.H.N) waxa uu yidhi;- codkaa shaydaanku dadka ku kaxaysanayaa waa heesaha.
Ibnu Qiyamna (I.H.N) waxa uu yidhi:- Khiyaamooyinka Cadowka Illaahay adeegsado ee uu ugu dhowaado qofka cilmigiisu yar yahay ama caqligiisu iyo diintiisu, ee uu ku qabsado dadka jeehilinta ah quluubtooda waxa ka mid ah dhagaysiga heesaha iyo aaladaha xaaranta ah si uu quluubta uga jeediyo quraanka oo uu uga dhigo mid ku sugan faasuqnimo iyo caasinimo, waana cod shaydaan, waana xijaab adag oo kaga gudban quraanka, waa wax fududeynaya sinada oo faasuqu uu ku gaadhayo ta uu caashaqsan yahay, shaydaanku waxa uu u qurxiyay nafta khiyaamo, baadil ayaana uu uga dhigay wanaag, waxaana uu qaabil siiyay hoogiisa, waxaana dartii looga tagay quraanka, hadalkiisa waxa uu ku soo koobay xumaanta iyo baadilka farxada iyo hamiga ku denbaynaysa murugada iyo masiibada ayaa keenaysa dunuuf ku qoran xaashiyaha ca’maasha.
Heesuhu waxay fududeeyaan Xumaanta dadka qaarna way ku faanaan iyagoo dadka fanaanita ah darajo ugu yeela. Miyaanay ogayn dadkani in qof walba qiyaamaha lala soo joojin doono cida uu jeclaa?
Runtii kuwan fanaaniinta ah iyo fanaanaduhuba waa dad shaydaan ku dheel dheelayo, badhkood waxay u arkaan in uu fanku yahay risaalad tarbiyadeed iyo barbaarin laakiin marka aad maqasho kalmadahooga ayaad garanaysaa in uu yahay risaalad shaydaan, waayo waxay isku yeedhayaan kulmiyanayaan laba qof oo diintuba isku banayn in ay isku yimaadaan, Walaahi baan ku dhaartee run ayuu sheegay qofka yidhi fanaanitu waa boosta sinada.
Inamada iyo Hablaha Muslimiinta ahow: Runtii illaahay waxa uu ina amray in aynu nafteena daahirino "Waxa liibanay ka is nadiifiya" heesuna waa naftaada oo aad dulmiday, tuu illaahay ku yidhi nadiifi oo ka dheere xumaanta iyo shahwaadka mana aha in aad ku mashquuliso dhagaysiga heesaha, illaahay (SW) waxa uu yidhi "Ma aflaxaan kuwa dalimiinta ahi.".
Illaahay waxa uu yidhi " Dadka waxa ka mid ah kuwa dadka ka iibiya hadal laqmi ah si ay uga lumiyaan jidka illaahay si aan cilmi ahayn iyagoo ka dhiganaya dheel dheel kuwaa waxa u sugnaaday cadaab qadhaadh"Mufasiliintu waxay yidhaahdeen hadalkan laqwiga ah waxa uu luminayaa diintii iyo maalkii iyo wakhtigaba, C/laahi Binu Cabaasna (RC) waxa uu yidhi: Waa heesaha.
Nebigu (CSW) isago nooga dhigaya waxa uu yidhi:- (Umadayda waxa ka soo bixi doona kuwa xalaal ka dhigta xariirta iyo khamriga iyo waxyaabaha la tumo)waa waxyaabo xaaran ah laakiin waxa iman doona wakhti xun oo la xalaashado waxyaabahaa xaaranta ah.
Nebigu (CSW) waxa uu yidhi:- (Qoom umadayda ka mid ah ayaa khamriga cabi doona iyagoo magac kale ku sheegaya, iyagoo dushooda laga tumayo muusig naagana ay heesayaan, illaahay waxa uu ku khasifi doona dhulka waxaana laga dhigi doona doofaro iyo daanyeero)
Qofna yaanu u malayn in muusiga aan heesaha lahayn uu xalaal yahay ama aanu odhanin waa hees wadani ah, waa isku wada mid waana xaaran.
Intaa ka dib lacagta aad ku soo iibsato heesaha aad dhagaysanayso iyo wakhtiga aad ku luminayso miyaanad ogayn in lagu waydiinayo? Oo maalinta qiyaamahana ayna ku anfacayn fanaanad cod wanaagsanayd iyo mid kamanka tumi yaqaanay, camalka wanaagsan mooyaane. Maxaad u sii diyaarsatay la kulanka illaahay? Adigu se ma is xisaabisay?
Ugu Denbayn: Midkasta oo doona in uu ka toobad keeno oo uu xaqa u soo noqdo waa u bushaaraynayaa, qofka go’aansada in uu iska daayo heesaha dhagahiisana ka nadiifaya ha akhristo aayadan "Maalinta qiyaamaha dadku way kala tagayaan kuwa muuminiinta ah ee camalka wanaagsan la yimaada waxay galayaan bustaano cod wanaagsan"
Codkan wanaagsani: Nebigu (CSW) waxa uu yidhi:- ( Xuural Cayntu waxay idinka heesi Janada iyagoo leh anagu waxaanu nahay Xuural Cayn oo sugaya niman wanaagsan).
Hadii uu Qof is waydiiyo sidee ayaan iska daaya dhagaysiga Heesaha oo ay ku adkaato ha yeelo talaabooyinka soo socda:- cida ku dhaqaaqda insha allah way ku guulaysanaysaa.
1. Hala yimaado toobad dhab ah, hana ahaado mid hamigiisu sareeyo geesinimona leh si uu u qaato go’aan adag.
2. Ha burburiyo wixii cajalado heesa ah ee uu hayo.
3. Hadii uu dareemo in uu u baahan yahay dhagaysigii laxanka heesaha si deg deg ah ha u soo qaado kitaab quraan ah oo uu akhristo si ay ugu degto naftiisu xumaantana uu uga joogsado, hadii aanu quraanka akhriyi karayn ha soo qaato cajalad quraan ah uu dhagayso ama cajalada kale oo muxaadaro ah.
4. Marka uu ka tago dhagaysiga heesaha, qofka ku dheel dheela waa in aanu u celin wax hadal ah oo uu ku mashquulsanaado carabkiisu xuska illaahay, hadii uu mid ka mid ihi la hadlo waa in uu ku yidhaahdaa:- Illaahay Khayr ha kugu abaal mariyo, kalmadahan oo dhami waxay adbinayaan naftiisa, nafihiinana way hanuuninayaan.
5. Hadii aad la kulantaan cid ka mid ah ehelkiina oo dhagaysanaysa u sheega in ay xaaran tahay idinka oo ula hadlaya si degan, waxaana aad hadyad ugu dirtaan kutub quraan ah iyo cajalado quraan iyo muxaadaro ah iyo kutub kale oo qiimo leh, waxaana aad u waanisaan si degan idinka oo u sheegaya in dhagaysiga heesuhu idinka idinku yahay cidhiidhi.
Ugu denbayn walaalayaal: Waxaad ogaataan in talaabadani iska daynta heesuhu ay tahay dhibaato aad u sahlan hadii aad toobad dhab ah la timaadaan oo aad iska xidhaan daaqada shaydaanka, hana odhanina marka aad cajaladaa dhagaysto ayaan toobad keenaya ama bil ka dib waayo shaydaanku maalinta waxa uu idinka dhigayaa laba maalmood, imisaa wiil ama gabadh aan mar qudha carabkoodu heesta dayneyn imika iskaga hadhay oo u jeestay xuska illaahay, qofka shay uga tagay illaahay dartii illaahayna waxa uu ugu badalaa wax ka khayr badan.
Walaalayaal marka mid qaraabadiina ah ama saaxiibadiina ah uu dhagaysanayo heesaha ka waaniya, hadii uu kaligii dhagaysanayo oo idinku aydaan maqlayn ha odhanina wuu ka toobad keenaya ee maxaa iga saaran, hadii kale waxaad gacan siinaysaan ciidamada shaydaanka oo iyagu diidan in adoomadu wanaagsanaadan.
Waa maxay caqabadaha hortaagan halganka Jabhadda O...
Farriin Ku Socota Ardayda Ka Qalin-jebisay Jaamaca...
Faallo;.Yaa ku guuleystey dacwaddii Xisbiga Ucid ?...
Gumaysigu Afrika lixdankii daqadu ka baxay; Albaab...
Halku-dhigga maanta .dhaqanka iyo dabeecada.
Way isoo korisay iyada oo i moodaysa Ilmaheedii !
Maxaa Lagu ogaan karaa in Ganacsigaagu horumar sam...
Sida loo kala cunto badan yahay, looma kala caqli ...
Halku dhigga maanta: Bud ayaa madaxa laygala dhaca...
Qaadka maxaa iga raacay,sheeko gaaban.
Tariikh kooban.Gabayagii Waynaa.Maxamed Xaaji Cabd...
Talo ku socota Mudane Cali Warancadde .
Kumaad tahay adigu ?
Halku-dhigga maanta :- Bakhayl-ku ma qarsoomo.
Hadii lagu ka dooran siiyo ? Dukhsiga iyo Shinida ...
WAA QISO KU YAAB GALIN DOONTA,SHEEKADII JULEYBIIB....
QISADII ASXAABUL UKHDUUD
Hadaad tahay Ruux gaaban, talaan kuu hayaa aad ku ...
Shahaadada PHD ayuu sitaa wax ha ku dooran .
Somalidu maxay uga caado dhigataa isku sawirka dhu...
Dumarka Jannadu Xuuralcayn ma leeyihiin?
Warbixin ,Siday u Dhacayso dacwada Kenya & Somalia...
Qisadii asxaabul Kaaf (Hahfi) iyo wadanka ay dagan...
Qisadii la-magac-baxday :- Qur'aanka jiidhay !
Suugan kooban oo uu leeyahay Gabayagii waynaa ee X...
Safiirka dalka Britain u fadhiya Sacuudi Carabiya ...
Dulucda , Dardaaranka Ambaasaddor Cawil Adowgii ka...
Shirkii Muqdisho ee IGAD ma waxaa lagu shirqoolaya...
Saxiibkay ayaa Email Aakhiro iiga soo diray !!
Siyaasiyiinta iyo Madax-dhaqmeedka Somaliland midb...
Taariikhda Magaalada Saylac Iyo Beeshii Asal Ahaan...
Riyadii Qiyaamaha !!
Kow iyo Toban calamadood oo uu leeyahay Saxiiibka ...
WhatsApp sir malahee yuu ku sahayanin.
Mucjisooyinka Quraanka iyo Axaadiista Qudhaanjadu ...
Beenta Internatka lagu qoro oo faraha ka baxday.
Xigmadahii Aduunka ugu waawaynaa qaar ka mida .
Sedaxdii Ilmood ee yaraanta ku hadlay.